ဘိုးအင်းက F / A 18E Super Hornet တိုက်လေယာဉ် FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
ဘိုးအင်းက F / A 18E Super Hornet တိုက်လေယာဉ် FS2004
အရွယ် 14.11 ကို MB
downloads ရယူရန္ 30 900
Author: TEAM သည် FS KBT
နောကျဆုံးရေးသားခြိနျ 30 / 11 / 2009The ဘိုးအင်းက F / A-18E / F ကို Super Hornet တိုက်လေယာဉ်တစ်ဦး 4.5 + မျိုးဆက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအခြေစိုက်ဘက်စုံသုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါက F / A-18E Single-ထိုင်ခုံမူကွဲနှင့် F / A-18F ယှဉ်ဖောက်မဆံ့မူကွဲအ F / A-18C နဲ့ D Hornet ၏ပိုကြီးပြီးပိုအဆင့်မြင့်အနကျအဓိပ်ပါယျဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Super Hornet တိုက်လေယာဉ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းရေး 20 မီလီမီတာသေနတ်ရှိပြီးဝေဟင်မှဝေဟင်ပစ်ဒုံးပျံများတပ်ဆင်ထားသောနှင့်ဝေဟင်မှမျက်နှာပြင်လက်နက်များသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အပိုဆောင်းလောင်စာအထိငါးပြင်ပလောင်စာဆီကန်များနှင့်အတူသယ်ဆောင်နိုင်ပြီးလေယာဉ်ပြင်ပလေထုဆီဖြည့ system ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တစ်ဦးလေကြောင်းချီရေနံတင်သင်္ဘောအဖြစ် configured နိုင်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းပိုင်းတွင် McDonnell Douglas ကထုတ်လုပ်ခြင်း, Super Hornet တိုက်လေယာဉ်များပထမဦးဆုံး 1995 အတွက်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ full-rate ကိုထုတ်လုပ်မှု McDonnell Douglas နှင့်ဘိုးအင်း၏ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းယခင်တစ်လပြီးနောက်, စက်တင်ဘာလ 1997 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Super Hornet တိုက်လေယာဉ် 1999 ကတည်းက F-14 Tomcat အစားထိုး, 2006 အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေတပ်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှု ဝင်. နှင့်မူရင်း Hornet နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်။ 2007 ခုနှစ်တွင်တော်ဝင်သြစတြေးလျလေတပ်က၎င်း၏အိုမင်းသည့် F-111 စင်းကိုအစားထိုးစူပါ Hornet အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ (အရင်းအမြစ် Wikipedia)
တစ်ဦးကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ add-on တစ်ခု paware ထက်ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သော! အရည်အသွေးဂရပ်ဖစ်များနှင့်လေယာဉ်မော်ဒယ်အံ့သြဖွယ်များမှာ! က G များ၏သက်ရောက်မှုများဿုံအဖြစ်ကောင်းစွာပွားနဲ့ post လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ အဆိုပါကို virtual လေယာဉ်မှူးအခန်းလည်းပစ္စုပ္ပန်နှင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Soko က G-2 Galeb FS2004
ဒေါက်ဂလပ် A4 Skyhawk FS2004